‘ITONWA WETI YANGU UPORE’ | Kwayedza
03 Jun, 2021 - 13:06 2021-06-03T13:07:01+00:00 2021-06-03T13:07:01+00:00 0 Views
Kingstone Mapupu, Beatrice Gadaga naMary Chimenya
MURUME anogara kuUnit A, kuChitungwiza, arikuti akashereketerwa nekuiswa runyoka kana kuti rukawo nemukadzi aimbova shamwarikadzi yake zvikakonzera kuzvimba kwegumbo rake uye mudzimai uyu anonzi ari kupika kuti kana achida kupora, anotofanirwa kubvuma kudhudhudzira kunwa weti yake.
VaIshmael Muronda (47) vanoti shamwarikadzi iyi (zita tinaro) ndiyo yakavashereketera nekuda kwegodo rekuti havana kuzoiroora.
Vanoti akavaudza kuti “tichapedzerana” mushure mekunge varamba kumutora semudzimai wavo wechipiri.
Mukadzi uyu, uyo aimbova sahwira wemudzimai wavo, vanoti vakadanana naye nguva yavaishandira kuNamibia kusvikira vazodzoka munyika muno vachiita zvekubiridzira.
“Ndakadanana nemukadzi uyu ari sahwira wemudzimai wangu tichiita zvekubiridzira. Ndingangoti ndiye akatondipfimba nekuti ainditumira mashoko ezvinyadzi kudzimara ndawira,” vanodaro VaMuronda.
Murume uyu anotsenga-tsenga mukanwa apo anobvunzwa kuti vakasasana pabonde kakawanda here nemukadzi uyu.
“Mukadzi uyu aitoda kuti ndimutore ndimuite mudzimai wangu wechipiri izvo anototaura nanhasi. Akandivimbisa kuti ndikarega kunwa weti yake bedzi, gumbo rangu haripore.
“Akatombouya achida kuti aite weti yake ondipa ndinwe izvo ndakanga ndabvuma pakazoguma paita mhirizhonga nemamwe madzimai muno nehanzvadzi dzangu ndikazorega kuinwa,” vanodaro VaMuronda.
Gumbo remurume uyu razvimba zvekuti haachakwanisa kupfeka matirauzi zvekuti anotoita zvekumanikidza uyewo bonde nemudzimai wake anoti haachagona kuita nekuda kwedambudziko iri.
“Ini ndaiita basa rechigadhi kune imwe kambani iri muHarare apo gumbo rangu rakatanga kuzvimba mumwedzi waGumiguru gore rakapera. Ndaipota ndichibva kubasa ndichienda kumusha kwangu kwaZvimba uko ndaiita mabasa ekuzviriritira izvo ndave kutadza.
“Zvose zvakashaya basa pakatanga gumbo rangu kuzvimba mushure mekunge mukadzi uyu andivimbisa kuti ndichazviona.”
VaMuronda vanoti vari kuedza kukumbira ruregerero kumudzimai uyu kuti amuroyonore asi ari kuramba achiti achatofa chete.
“Handina zvangu chandinacho kuti ndimuripe nekuti basa rakapera uye kuti ndiwane mari yekumupa handina.
“Mudzimai wangu wandinaye ane mwana mucheche nevamwe vatatu vanoenda kuchikoro uye mari handichaiwana. Vekambani yandaishandira vakati kana ndichirwara havasisina basa neni uye ndinozodzoka kubasa kana ndapora,” vanodaro.
VaMuronda vanoti masvondo matatu adarika, mudzimai uyu akaenda kumba kwavo akaita mhirizhonga achiti ndiye mukadzi wavo wechipiri.
“Mukadzi uyu akauya pano masvondo matatu akadarika achipopota kuti ini zvandakamuita nemudzimai wangu achapedzerana nesu, anogara muno muUnit A, muChitungwiza,” vanodaro.
VaMuronda vanoti vakaenda kuchipatara cheChitungwiza Central Hospital kukanzi kunodiwa $33 431 yekuongororwa namachiremba iyo vakashaya sezvo paine fungidziro yekuti vanogona kunge vaine gomarara.
“Mari yekuchipatara ndiri kuishaya, ndiri kungorarama nekuenda kumaporofita uko ndinotaurirwa kuti mudzimai wandakaramba uyu ndiye akandishereketera neshanje kuti ndakaregererei kumuroora. Vanoti ndiye chete anogona kundibatsira kuti gumbo iri ripore.”
Murume uyu anoti akakumbira ruregerero kumudzimai wake nekuda kwekudanana uko akaita neshamwari yake iyi.
“Mudzimai wangu ndakamukumbira ruregerero nezvandakaita izvi nekuti ndiye ave kutondibatsira sezvo ndisisagone kushanda kana kuita chimwe chinhu,” vanodaro VaMuronda.
Mai Locadia Muchingami-Muronda (40), mudzimai waVaMuronda, vanoti nyaya yekuti sahwira wavo aidanana nemurume wavo vakatozozviziva ave kurwara zvichibudira kumaporofita.
“Vanhu ava vaidanana ini ndisingazive, ndakatozozviziva baba vave kurwara kudai. Ndakavaregerera, chishuwo changu ndechekuti vapore vadzokere kubasa vagoshandira mhuri yedu.
“Izvozvi inhamo yoga-yoga pamusha pano, tinoda mari yerendi neyekudya uye tine vana vanoda mari yechikoro,” vanodaro Mai Muchingami Muronda.
Kune vanoda kubatsira mhuri iyi vanokwanisa kuvaridzira nhare dzinoti 0775 164 649.
Kwayedza haina kukwanisa kutaura nemukadzi anonzi ndiye akaisa runyoka kumurume uyu.
Sekuru Elisha Mutanga vekuUshewokunze, muguta reHarare vanoti VaMuronda vanokwanisa kubatsirwa chete nemudzimai akavashereketera.
“Kunwa weti yemudzimai uyu yakasanganiswa nemishonga yechivanhu ndiko chete kunoita kuti murume uyu ararame. Ngaanyengetedze mukadzi uyu vawirirane nekuti akasadaro anofa rakacheka nyika,” vanodaro Sekuru Mutanga.